Kungani iNetflix nezinye izinhlelo zokusebenza ze-iOS zingaphumi kuma-macOS - Tech - Numerama - Tamban RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »Kungani iNetflix nezinye izinhlelo zokusebenza ze-iOS zingaphumi ku-macOS - Tech - Numerama
Kungani iNetflix nezinye izinhlelo zokusebenza ze-iOS zingaphumi kuma-macOS - Tech - Numerama
I-Apple iqhubekela phambili ekuhlanganyeleni. Kepha uma amathuluzi esephelelisiwe, imodi yokusabalalisa ayilungele bonke abathuthukisi.
Kuhlangana uthe ukuhlangana ? Eminyakeni yamuva, leli yizwi esilizwa kakhulu emilonyeni ye izikhulumi Apple Phakathi kwe-iPad Pro nomhlaba we-MacBook, umngcele uyancipha unyaka nonyaka. Futhi okuyiqiniso kokusetshenziswa kuqala ukuba kwizicelo: I-WWDC 2019, i-Apple imemezele ukuvulwa kubo bonke abathuthukisi bokuzama kwayo iCatalyst, ngokutholakala komphakathi kokukhishwa kwe-macOS Catalina. Ukubeka ngokushesha, i-Catalyst yindlela eyethulwe ngayo elula ukuletha izinhlelo zokusebenza ze-iOS endaweni yonke yeMac. I-Apple iyisebenzisela ezinye izinhlelo zokusebenza, njengeNdlu noma Izikhumbuzi ezabelana ngekhodi efanayo yomthombo.
Kepha lapha, UCatalina uphumile kanye nokukhubazeka kwezicelo ze-iOS ku-macOS akwenzekanga - sibala i-24. Ezinye kuhlelwe, njenge-Twitter, okuhlose ukubamba ithuba lokubuyela kuma-macOS ngesicelo umdabu. Kepha abanye ngeke beze, njengeNetflix omemezele ukuthi isicelo asikho kulolu hlelo okwamanje. I-BloombergOnjiniyela bakhombise ubunzima ku gqoka izinhlelo zokusebenza. Ukutholwa okwabelwe ngunjiniyela omkhulu weNumerama osebenze ngokuhlanganiswa kwalolu hlobo, uncamela ukungaziwa: " Ukuguqulwa kuyamangaza, kepha akupheleli. Kudinga umsebenzi nokulungiswa okuningi ".
I-24 iPad Izinhlelo zokusebenza ku-Mac App Store // Source: Numerama
Le miphumela ibilindelekile. Asikwazanga ukucabanga isoftware engabhala kabusha ikhodi ngaphandle kokushiya amaphutha noma ukuguqula isikhombimsebenzisi ngobuhlakani - obekungafanele bufane ngokuthinta noma ngesikhombisi. Kepha lokho akuchazi konke. Inkinga yeCatalyst ngesikhathi sokukhishwa kwe-macOS Catalina ibaluleke kakhulu futhi iza ngqo ngendlela izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswa ngayo.
Izinhlelo zokusebenza ezimbili ezihluke kakhulu
Namuhla, lapho unjiniyela enza uhlelo lokusebenza lwe-Apple ecosystem, he ufingqa ikhodi yayo "kufolda" efanayo ehlanganisa izinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza: i-iPhone, i-iPad, i-Apple TV, njll. Lokhu kuvumela ukuthi kube nokusebenza okufanayo, imethadatha okwabiwe ngayo, imvamisa efanayo yokuvuselela futhi okubaluleke kakhulu, uhlelo lokusebenza olulodwa lokuthenga uma kunesidingo. I-Apple ecosystem idinga, uma inguqulo yohlelo lokusebenza oyithenga ku-iPhone yakho itholakala kwi-Apple TV, izofakwa ngokuzenzakalelayo.
Ku-iOS, uhlelo lokusebenza lweKherothi esingumnikazi wethu libiza i-5,49 €. Kubiza izikhathi ze-3 le ntengo kuma-macOS. // Umthombo: Isinombolo seNumerama
I-Catalyst ayifaki uhlobo lwe-Mac yalolu hlelo lokusebenza lwendawo yonke. Iguqula uhlelo lokusebenza lwe-iOS lube uhlelo lokusebenza lwe-Mac. Lokhu kusho ukuthi kukhona yonke enye inqubo yokufaka ezofakwa esitolo seMac App. Futhi yilapho lapho kubanjwa khona: uhlelo lokusebenza oluhlukile. Uma ikhokha, umsebenzisi kuzodingeka ayithenge kabili. Uma inkokhelo engaphakathi nohlelo ithengwa ngakolunye uhlangothi, ngeke idluliselwe kolunye uhlangothi. Uma uhlelo lokusebenza lufakwe ku-iOS, ngeke ibe khona ku-macOS ngokuzenzakalelayo.
Okubi kakhulu: usuku lapho i-Apple izophothula umqondo wayo wokuhlanganiswa, abasebenzisi abafake uhlelo lokusebenza "i-Catalyst" bazogcina ngesicelo sesibili "somdabu nese universal" ukufaka, okuzoba ukuphela okusemthethweni, omunye kube yisikhulu kwehla ngokungazelele. Isimo somuntu onamava, kepha ake ucabange manje esidlulisela lokhu emphakathini jikelele: kufanele cishe kuvuleke insiza enikezelwe. Siyaqonda ukuthi iNetflix ayikufaki engcupheni.
Isixazululo sesikhathi esiphakathi?
Enye yezisombululo i-Apple ezinganikeza ukuxhaswa esobala umsebenzisi uhlelo lokusebenza lwe-Mac kwisicelo se "universal" ngosuku ezotholakala ngalo. Ngomthombo wethu, lokhu kungaba wuphawu oluhle futhi kungavimbela lesi simo, kepha i-Apple ayikakhulumeli kudivayisi enjalo. Kusukela lapho, abathuthukisi abaningi, ikakhulukazi izinhlelo zokusebenza ezithandwayo, basesigabeni sokulinda ukuphuma kwe-macOS entsha.
« Lokhu akumangazi, ngoba yonke into ibisemibhalo yomphakathi », Siyaqinisekiswa. Uma le ndaba iphathwa namuhla futhi ingena endaweni yokubuka, kungenxa yokuthi uCatalina uphume futhi abasebenzisi abalandela izikhangiso kungenzeka bathokozile kakhulu ngalesi sici. Namuhla, kunzima ukweluleka ukuthenga (kaningi okubizayo) isicelo kabili: I-Apple kahle ithe, ikusasa lizoba ngaphezulu futhi okuguqukayo phakathi kwamapulatifomu alo. Ukuthi "nini" no "kanjani" kuzohlala kucacisiwe.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/559838-pourquoi-netflix-et-dautres-apps-ios-ne-sortent-pas-sur-macos.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=559838
I-Twitter icele izinombolo zakho zocingo ukuthola ukuphepha okuthe xaxa, bese ibavumela abakhangisi ukuthi bayisebenzise - Tech - Numerama
Enye yezinhlelo zokusebenza ezaziwa kakhulu ngeGoogle ingagcina ikumodi emnyama